वेबको लागि आईक्लाउड मेल एक बदलाव हुन्छ - टेलेस रिले
वेबको लागि आईक्लाउड मेलले चाँडै नै पूरै नयाँ डिजाइन पाउनेछ। संस्करण हाल केहि handpicked प्रयोगकर्ताहरु संग परीक्षण मा छ।
वेब सेवाहरू र अनुप्रयोगहरू सफ्टवेयर हुन्। नयाँ अपडेट प्रकार्यहरू, फिक्सहरू (बगहरू वा सुरक्षा) र परिमार्जनको लागि यी तिनीहरूका ब्याचहरू प्राप्त गर्दछन् डिजाइन। आज यो हो iCloud मेल हुन लागेको वेबको लागि बदलाव। परिवर्तनहरू महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ।
वेबको लागि आईक्लाउड मेल एक बदलाव आउँदैछ
Gmail ग्राहकहरू जस्तै मेल सेवाहरू र याहू धेरै लोकप्रिय छ र एक लामो समय को लागी आफ्नो वेब ईन्टरफेस छ। भनिएको छ, यदि तपाईं आईक्लाउड मेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, सायद तपाईंले सोचेकै हुनुहुन्छ कि इन्टरफेस सुधार गर्न सकिन्छ, वा कम्तिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ। आज शुभ समाचार। धेरै स्रोतका अनुसार यो देखिन्छ कि एप्पलले वेबको लागि आईक्लाउड मेलको लागि बिल्कुल नयाँ इन्टरफेसको परिक्षण शुरू गरेको छ।
एक पूर्ण पुन: डिजाइन ईन्टरफेस, स्पष्ट र अधिक आधुनिक
यदि कुनै कारणका लागि तपाईको वेब इन्टरफेस मार्फत आईक्लाउड मेल पहुँच गर्न आवश्यक छ भने, माथिको स्क्रिनशटले तपाईंलाई नयाँ संस्करण कस्तो देखिनुपर्दछ भन्ने बारे निकै करीबी स ind्केत दिनेछ। शव्दको दुबै इन्द्रियमा - वर्तमान संस्करणको तुलनामा सम्पूर्ण कुरा अझ स्पष्ट देखिन्छ। केहिले macOS र iPadOS को लागि मेल अनुप्रयोगको नयाँ संस्करणको इन्टरफेसको साथ समानताहरू फेला पार्नेछन्।
एप्पलले कहिले पनि वेबको लागि आई क्लाउड मेलको कम्तिमा वास्ता गरेन, कम्तिमा धेरै वर्षसम्म। यो राम्रो कुरा हो कि कपर्टिनो कम्पनीले यसलाई ध्यान दिएर हेर्यो। सायद सेप ब्रान्डले यो नयाँ, अधिक आधुनिक ईन्टरफेसको साथ अधिक प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आशा गर्दछ, र केवल ती व्यक्तिहरू होईन जसले पहिले नै एप्पल उत्पादनहरू प्रयोग गर्छन् र उनीहरूको ईमेलहरू मेल अनुप्रयोग मार्फत पहुँच गर्न सक्दछन्।
वेब ईन्टरफेस अझै जीमेल वा याहू जस्ता सेवाहरूको बराबरी हुनु अघि लामो यात्रा गर्न बाँकी छ, तर यो अद्यावधिक धेरै स्वागत छ। अहिलेको लागि, नयाँ संस्करण सबै उपयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छैन, यो अझै परीक्षणमा छ। यो आईपडओएस र म्याकोसका लागि अपडेटहरूको साथ आउँदो हप्ताहरू / महिनाहरूमा ठूलो पैमानेमा रोल आउट गर्नुपर्नेछ। फेरि जारी राखौंला !
आईफोन १२ को डिजाइनको साथ आईपड टच यस बर्ष आउन सक्छ
एप्पल वाच श्रृंखला:: सपाट किनारहरूको एक डिजाइन?
ब्या Bang्ग र ओलुफसेन बेलाब २ 28, column १,,14० मा एक स्तम्भ स्पिकर
यो लेख https://www.begeek.fr/icloud-mail-pour-le-web-se-refait-une-beaute-357844 मा पहिलो देखा पर्‍यो
TELES RELAY 55684 पोस्ट 1 टिप्पणी
भारत: प्रधानमन्त्री मोदी आज मरुभूमि, भूमि गिरावट र खडेरी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र भर्चुअल उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्छन् भारत समाचार